Kuunza mota kubva kuSpain kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa mota yako yeSpanish kuUnited Kingdom?
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuSpanish dzinoendeswa kuUK nevaridzi vadzo uye vatove pano, zvinongoda kuti mapepa ekunyoresa ekunze agadziriswe neDVLA. Isu tinogona zvakadaro kubata nzira yese yekutora mota yako kubva kuSpanish kuenda kuUnited Kingdom kana usiri kutyaira mota yako kuenda kuUK.
Yedu makotesheni akazara akabatanidzwa uye akavakirwa zvachose pane zvaunoda. Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve mafambiro ekupinza mota yako pane ino peji, asi usazeze kupinda mukutaurirana uye utaure nenhengo yevashandi.
Zvichienderana nenzvimbo yemota yatinogona kutora kuUK, newe uchidzosera mota kumashure, kana isu tinogona kutakura mota yako kudzokera kuUK pane rori yemotokari dzakawanda. Mitengo inotangira pa £ 600 + VAT kusvika pa £ 950 + VAT zvinoenderana nenzvimbo yauri kuSpain uye tinomhanyisa masevhisi evatengi vedu.
Paunenge uchipinza mota kubva kuSpain kuenda kuUK, unogona kuita zvachose kubhadhara mutero uchipa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Kune mota dziri pasi pemakore gumi, paunosvika kuUK, mota yako inofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Isu tinogona kuita izvi nemaitiro anonzi kuwirirana kana kuburikidza neIVA kuyedzwa. Kune mota dzinopfuura makore gumi, ivo vachada kupasa bvunzo dzeMOT, kutarisa zvikamu zvemotokari kuchengetedzeka uye kugona mumugwagwa.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuSpain kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Dzinopfuura gumi-makore-makore mota uye zvekare ndeyemhando mvumo isingabvumirwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kugadziridzwa kusati kwanyoreswa. Iko kunatsurudzwa kunoenderana nezera asi kazhinji kune iwo marambi epamberi uye kumashure kwechiedza mhute. Mota dzinopfuura makore makumi mana ekuberekwa hadzidi chero kuyedzwa uye tinogona kunyoresa mota iri kure ichiri kukero yako yekuUK.